Toriteny - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Mety manontany ianao hoe, "Inona no toriteny?"
Ny valiny tsotra indrindra: kabary. Ny iray miteny ary maro no mihaino. Ny tanjona amin’io lahateny io dia ny hahatonga ireo andinin-teny tranainy ao amin’ny Baiboly ho azo takarina. Anisan’izany ny famaliana ilay fanontaniana hoe: Inona no ifandraisan’ny soratra tranainy iray amiko sy ny fiainako? Raha mametraka an’io fanontaniana io amim-pahamatorana dia ho gaga ny amin’ny maha-ara-dalàna ny Baiboly. Ity kabary ity koa dia te-hanome tosika ny amin'ny fomba hahombiazantsika bebe kokoa ny fiainantsika (miaraka amin'Andriamanitra).
Ahoana no dikan'izany? Ity misy fampitahana: Raha mividy fitaovana teknika ianao ankehitriny dia tonga amin'ny torolàlana fampiasaina. Manazava ny fomba fandidiana ny efijery na ny fitaovana fanamoriana. Raha tsy misy ny torolàlana momba ny fampianarana toy izany dia mety ho antitra ianao. Sarotra kokoa ny fiainana noho ny fitaovana teknika rehetra. Maninona ianao no tsy mahazo fanampiana sy soso-kevitra indraindray amin'ny fotoana mety hahomby kokoa?
Wikipedia dia manome ity famaritana manaraka ity momba ny toriteny:
Ny toriteny (latina praedicatio) dia lahateny ao anatin'ny tontolon'ny fankalazana ara-pivavahana, matetika misy votoaty ara-pivavahana. Manana toerana manokana ao amin’ny Testamenta Vaovao sy amin’ny fanompoam-pivavahana kristianina ny toriteny. Ao amin'ny teolojia kristiana, ny foto-pampianarana momba ny fitoriana dia antsoina hoe homiletika. Amin'ny teny anglisy sy frantsay, ny toriteny dia antsoina hoe "sermon" (avy amin'ny teny latina hoe sermo: fifanakalozan-kevitra, resaka; lahateny).
Bryan Chapell nanoratra ao amin'ny bokiny "Fitoriana mifantoka amin'i Kristy":
Ny soratra rehetra ao amin'ny Soratra Masina dia voalaza fa mifandraika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalany. Misy andininy sasany miomana ho an'i Jesosy amin'ny alàlan'ny fanehoana ny filana famonjena. Misy andininy hafa milaza mialoha ny fiavian'i Kristy. Ny hafa kosa dia taratry ny lafiny famonjena ao amin'i Kristy. Ary misy andininy hafa maneho ny vokatry ny fanavotana ao amin'i Kristy, dia ny fitahiry be dia be amin'ny alàlan'ny fahasoavan'i Jesosy.Ny andininy sasany dia toy ny voa mbola tsy nipoitra. Ny fifandraisana amin'i Kristy dia azo jerena rehefa jerena avy amin'ny fomba fijerin'ny Testamenta Vaovao.